"Kutheni ufuna kakhulu?" - omnye umhlobo womnye.
"Andifuni ukuphila ngaphandle kwakhe," uphendula.
"Kodwa akafanelekanga umnwe wakho omncinci, kutheni kufuneka ahlazeke kangaka?" Ufuna okokuqala.
"Kodwa ndingathini na ngoku, andiswele mntu" ...
Incoko enjalo phakathi kwamantombazana amabini endandisandul 'ukuva, kwaye oku kwabangela ukuba ndibonise. Enyanisweni, yintoni eyenza siselula kwaye sihle - sizithobe phambi kwalowo okanye loo ndoda, kwaye iphi na umgca phakathi kokuhlaziswa kunye nomnqweno oyisiseko wokugcina ubudlelwane? Xa intombazana ihlazisa ngokwalamano?
Ngokuqhelekileyo, lo mgca uhlukile kuwo wonke umntu. Enye intombazana isilungele nantoni na isithandwa sayo. Uya kucela ukuxolelwa, aze azive enetyala nokuba unetyala okanye cha. Kwimeko engabalulekanga kakhulu, uya kucela uxolo, umcele ukumxolela, uya kuphelisa umnxeba wakhe othandekayo, uwahlambe nge-SMS-imiyalezo ngokucela ukuxolelwa. Ukususela kwiintombi zentombazana enjalo, ngokuqinisekileyo, kuya kubonakala ngathi ihlazo lesidima sayo. Baya kumnciphisa kwi-call elandelayo kunye nomnqweno omncinane wokudibana nokuthetha.
Enye intombazana ngakolunye uhlangothi, aluzange liqale libize kwaye liqoke iintlanganiso, lingavumeli uthando kuqala, kwaye nantoni na ehlabathini ayifuni ukuxolelwa, nokuba ngaba yinto emele ityala. Ukholelwa ukuba zonke ezi ngasentla zingaphantsi kwesidima sakhe kwaye kuya kumthobela, njengentombazana, ebudlelwaneni.
Bonke abantu bahluke, kunye nabalinganiswa babo, ngeemvakalelo zabo kunye nokuqonda kwabo ngokuchanekileyo kwalokhu okanye okwenza ulwalamano nomntu othandekayo. Nangona kunjalo, ngenxa yeemeko zobomi, kunjalo, ininzi iyakwenza ngokuthe xaxa ngokulinganayo.
Okokuqala, xa intombazana ibonisa ukuba uyamthanda, uyayikhathalela ngokunyamekela. Abaninzi abayithandi, kwaye amantombazana amaninzi ayibheka le ndlela yokuziphatha komhlobo okanye ukuthotywa kwe-banal kwesidima sabo.
Okwesibini, ukuba umfana uthathe isahlulo sokubambisana nentombazana, ngoko abanye abanakukwazi ukudibanisa nale nto kwaye baqale ukuphishekela umthandi wangaphambili. Namaxesha onke uzama ukuyibuyisela, ukukholisa okanye ukusongela into ethile. Kula maninzi amantombazana, lo mkhuba awuvunyelwanga, "kuba - oku kukuhlaziswa!" - baya kuthi. Ngendlela, akusoloko kumnandi kubafana (nangona ngamanye amaxesha ukuzithemba kwabo), ngokuqhelekileyo banobuhlungu.
Okwesithathu, ukuba kukho ingxabano. Amantombazana amaninzi akaze afikelele kuqala, ecinga ukuhlaziswa. Nangona apha kunokwenzeka kwaye ukuphikisana. Ngokuxhomekeke ekubeni ngubani othe tye kwaye ngubani onecala, kwaye ukuvavanya imeko ngendlela engqiqweni, kunokwenzeka ukwandisa isandla kwisibambiso, kwaye oku akuyi kuthathwa njengento yokuhlaziswa, kuya kuthathwa njengokulondolozwa uxolo kulwalamano. Nangona apha, nawe, kufuneka unamathele kwigolide elibhekiselele, kuba ubeka isandla sakho rhoqo, unokwenza umphefumlo wakho umlingane kuwo, kwaye ke kufuneka uthobe, ucele ukuxolelwa into enokuthi ityala. Zama ukungavumeli imeko apho intombazana ihlazisa ngayo.
Okwesine, kukho amaxesha apho umntu ehlangana ezimbini (mhlawumbi ngaphezulu) amantombazana ngexesha elinye. Yaye ukuba enye yala mantombazana iyazi malunga nale nto kwaye iyaqhubeka nokugcina ubudlelwane, oko kuya kuthotywa, kwaye, kunokuthiwa, kabini. Ngakolunye uhlangothi, uhlaziswa ngumfana, kwenye into yena ngokwakhe. Emva koko, ukunyaniseka, ukuzinikela kunye nococekileyo, uthando olungenanto luye lwacinywa.
Ekugqibeleni ... Xa intombazana ihlazisa ngokwalamano , ayihloneli kwaye ayithandi ngokuyinhloko. Ukuthotywa kweentlondi kulwalamano, intombazana isoloko ishukunyiswa yinto yokwesaba ukuba yedwa, yokwesaba ukuba ayidingi mntu ngaphandle kwayo . Ezi zigqibo ziphosakeleyo, kuba ukuba intombazana inentlonelo encinci, ubuncinci kuye kwaye iyazi ixabiso, ayiyi kuvumela naluphi uloyiko lokwenza ukuba ihlaziswe, ukunikela ngemigangatho yakhe, ukuzingca kwayo.
Iingxaki ezinxulumene phakathi kwamadoda nabasetyhini
UStanislav Sadalsky uthetha ngomtshato weVerinskaya neGradsky
I-Ginger pie kunye nemifuno
Amathoyizi ezemfundo abantwana abantwana abasusela kwiminyaka emithathu ubudala
Indlela yokuchonga ngesandla ngesandla esiza kuba ngumntu womntu: Izifundo ze-Chiromancy
Unxibelelwano lomntwana oseneminyaka emdala
Ukubaluleka kwama-moles kumzimba nobuso
U-Irina Bezrukova waba ngumdla kwi-show "Ukudansa ngeenkwenkwezi"